မည်းနေတဲ့ချိုင်းကို တစ်ပတ်အတွင်း ဖြူဝင်း သွားစေမယ့် သဘာဝ နည်းလမ်း ( ၅ ) မျိုး - Focus Myanmar
August 7, 2019 By Myanamr Plus in အလှအပ Tags: မိန်းကလေး
မိန်းကလေး တစ်ယောက်က မျက်နှာလေး လှလို့၊ ခန္ဓာကိုယ်လှလို့ ၊ အသားအရေလှလို့၊ဖက်ရှင်ကျလို့ ဆိုပြီး ပြီးပြည့်စုံပြီလို့ သတ်မှတ်လို့ မရသေးပါဘူး ။ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှု ရှိဖို့ ၊ ချွေးနံ့တွေ ၊ အနံ့ဆိုးတွေ မထွက်နေဖို့လည်း လိုပါသေးတယ် ။ ဒီတော့ လက်ပြတ်လေးတွေ ဝတ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်လို့ လက်မြှောက်လိုက်တဲ့ အခါတွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယုံကြည်မှု ရှိရှိ ၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ဆိုရင် ချိုင်းလေးတွေ မည်းမနေဖို့ လိုပါတယ် ။ ဒါကြောင့် မည်းနေတဲ့ ချိုင်းနေရာတွေကို ပြန်ပြီးဖြူသန့်သွားအောင် လုပ်ပေးမယ့် သဘာဝ အိမ်တွင်းနည်းလမ်း လေးတွေကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်နော် ….
( ၁ ) အာလူး
ရေချိုးပြီးတိုင်း အာလူးကို ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး ချိုင်းမည်းနေတဲ့ နေရာမှာ ပွတ်တိုက်ပေးပါ ။ တစ်ပတ်လောက် ဆက်တိုက် လုပ်ပေးရင် မည်းနေတဲ့ ချိုင်းနေရာက သိသိသာသာ ဖြူဝင်းလာ မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် … ။
( ၂ ) ပန်းသီးရှာလကာရည်
ရေချိုးပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ပန်းသီးရှာလကာရည်ကို ဂွမ်းစနဲ့ ဆွတ်ပြီး ချိုင်းမှာ ပွတ်ပေးကာ ခြောက်တဲ့ အထိ ထားပြီး ရေဆေးချပါ ။ နေ့တိုင်း လုပ်ပေးသွားရင် တစ်ပတ် အတွင်းမှာ မည်းနေတဲ့နေရာတွေ ဖြူသန့်သွားပါလိမ့်မယ် … ။
( ၃ ) မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနဲ့သံပရိုရည်
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနဲ့ သံပရိုရည်ကို အနှစ်ဖြစ်အောင် ရောပြီး ချိုင်းမှာ ထူထူလေး လိမ်းပေးကာ ၅ မိနစ်လောက်ကြာရင် ရေပြန် ဆေးချပေးပါ ။ တစ်ပတ်ကို ၄ ကြိမ်လောက် လုပ်ပေးရုံနဲ့ မည်းနေတဲ့ ချိုင်းက သိသိသာသာ ဖြူဝင်းလာ စေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် … ။
( ၄ ) ရှားစောင်းလက်ပပ်
ရှားစောင်းလက်ပပ် အတွင်းသား အနှစ်ကိုထုတ်ယူပြီး ကြေညက်အောင် ခေါက်ပြီး ချိုင်းမှာ လိမ်းကာ ခြောက်တဲ့အထိ စောင့်ကာ ရေပြန်ဆေးပေးပါ ။ တစ်ပတ်လောက်ဆက်တိုက် လုပ်ပေးသွားရင် မည်းနေတဲ့ ချိုင်းနေရာက ဖြူသန့်သွားတာကို တွေ့ရမှာပါ …။
( ၅ ) သကြားနဲ့သံလွင်ဆီ
သကြားနှစ်ဆ ၊ သံလွင်ဆီ တစ်ဆရောပြီး ရလာတဲ့အနှစ်ကို ချိုင်းမှာလိမ်းပေးကာ နာရီဝက်လောက် ကြာရင် ရေနွေးလေးနဲ့ ဆေးချပါ ။ တစ်ပတ်မှာ ၄ ကြိမ်လောက်လုပ်ပေးရုံနဲ့ ချိုင်းလေးတွေ ဖြူပြီး သန့်လာပါလိမ့်မယ် နော် … ။ ။
မညျးနတေဲ့ခြိုငျးကို တဈပတျအတှငျး ဖွူဝငျး သှားစမေယျ့ သဘာဝ နညျးလမျး ( ၅ ) မြိုး
မိနျးကလေး တဈယောကျက မကျြနှာလေး လှလို့၊ ခန်ဓာကိုယျလှလို့ ၊ အသားအရလှေလို့၊ဖကျရှငျကလြို့ ဆိုပွီး ပွီးပွညျ့စုံပွီလို့ သတျမှတျလို့ မရသေးပါဘူး ။ တဈကိုယျရညျသနျ့ရှငျးမှု ရှိဖို့ ၊ ခြှေးနံ့တှေ ၊ အနံ့ဆိုးတှေ မထှကျနဖေို့လညျး လိုပါသေးတယျ ။ ဒီတော့ လကျပွတျလေးတှေ ဝတျရငျပဲဖွဈဖွဈ ၊ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျလို့ လကျမွှောကျလိုကျတဲ့ အခါတှမှောပဲ ဖွဈဖွဈ ယုံကွညျမှု ရှိရှိ ၊ လှတျလှတျလပျလပျ လှုပျရှားနိုငျဖို့ဆိုရငျ ခြိုငျးလေးတှေ မညျးမနဖေို့ လိုပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ မညျးနတေဲ့ ခြိုငျးနရောတှကေို ပွနျပွီးဖွူသနျ့သှားအောငျ လုပျပေးမယျ့ သဘာဝ အိမျတှငျးနညျးလမျး လေးတှကေို ဖျောပွပေး လိုကျပါတယျနျော ….
ရခြေိုးပွီးတိုငျး အာလူးကို ထကျခွမျးခွမျးပွီး ခြိုငျးမညျးနတေဲ့ နရောမှာ ပှတျတိုကျပေးပါ ။ တဈပတျလောကျ ဆကျတိုကျ လုပျပေးရငျ မညျးနတေဲ့ ခြိုငျးနရောက သိသိသာသာ ဖွူဝငျးလာ မှာပဲ ဖွဈပါတယျ … ။
( ၂ ) ပနျးသီးရှာလကာရညျ
ရခြေိုးပွီးတဲ့ အခြိနျမှာ ပနျးသီးရှာလကာရညျကို ဂှမျးစနဲ့ ဆှတျပွီး ခြိုငျးမှာ ပှတျပေးကာ ခွောကျတဲ့ အထိ ထားပွီး ရဆေေးခပြါ ။ နတေို့ငျး လုပျပေးသှားရငျ တဈပတျ အတှငျးမှာ မညျးနတေဲ့နရောတှေ ဖွူသနျ့သှားပါလိမျ့မယျ … ။
( ၃ ) မုနျ့ဖုတျဆိုဒါနဲ့သံပရိုရညျ
မုနျ့ဖုတျဆိုဒါနဲ့ သံပရိုရညျကို အနှဈဖွဈအောငျ ရောပွီး ခြိုငျးမှာ ထူထူလေး လိမျးပေးကာ ၅ မိနဈလောကျကွာရငျ ရပွေနျ ဆေးခပြေးပါ ။ တဈပတျကို ၄ ကွိမျလောကျ လုပျပေးရုံနဲ့ မညျးနတေဲ့ ခြိုငျးက သိသိသာသာ ဖွူဝငျးလာ စမှောပဲ ဖွဈပါတယျ … ။
( ၄ ) ရှားစောငျးလကျပပျ
ရှားစောငျးလကျပပျ အတှငျးသား အနှဈကိုထုတျယူပွီး ကွညေကျအောငျ ခေါကျပွီး ခြိုငျးမှာ လိမျးကာ ခွောကျတဲ့အထိ စောငျ့ကာ ရပွေနျဆေးပေးပါ ။ တဈပတျလောကျဆကျတိုကျ လုပျပေးသှားရငျ မညျးနတေဲ့ ခြိုငျးနရောက ဖွူသနျ့သှားတာကို တှရေ့မှာပါ …။
( ၅ ) သကွားနဲ့သံလှငျဆီ
သကွားနှဈဆ ၊ သံလှငျဆီ တဈဆရောပွီး ရလာတဲ့အနှဈကို ခြိုငျးမှာလိမျးပေးကာ နာရီဝကျလောကျ ကွာရငျ ရနှေေးလေးနဲ့ ဆေးခပြါ ။ တဈပတျမှာ ၄ ကွိမျလောကျလုပျပေးရုံနဲ့ ခြိုငျးလေးတှေ ဖွူပွီး သနျ့လာပါလိမျ့မယျ နျော … ။ ။